ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် Md. Shahidul Haque နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံရေး (ရေးရာ) တာဝန်ခံ ဒေးဗစ်ဟဲလ် / US Embassy in Dhaka
၇ ကြိမ်မြောက် အမေရိကန်-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မိတ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ ၁၀ ရက်က ဝါရှင်တန်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မိတ်ဖက် ဆက်ဆံမှု တည်တံ့ရေးနှင့် ဒုက္ခသည် ၁ ဒသမ ၁ သန်းကို ၎င်းတို့မူလ နေထိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆန္ဒအလျောက် ဘေးကင်း သိက္ခာရှိစွာဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြန်ပို့နိုင်ရေး လိုအပ်ချက်များကို အလေးပေး ဆွေးနွေးကာ ထပ်လောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
အမေရိကန်ကွန်ဂရက်၏ ထောက်ခံမှုကို စောင့်ဆိုင်းနေသည့် ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အတွင်း ရေကြောင်း ပိုင်နက်ဆိုင်ရာ အာရုံစိုက်စေမှု၊ တရားမဝင် ကူးသန်းမှုနှင့် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးပွားလာစေရေး လုံခြုံရေး အကူအညီများ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို ထပ်မံပေးအပ် သွားရန်လည်း အမေရိကန်က ကတိပြုခဲ့သည်။
ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် ပူးတွဲကြေညာချက်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် Md. Shahidul Haque နှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံရေး (ရေးရာ) တာဝန်ခံ ဒေးဗစ်ဟဲလ်တို့ ပူးတွဲ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် အစည်းအဝေး အကြောင်း ဒါကာမြို့ရှိ အမေရိကန် သံရုံးက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
နှစ်ဖက် အစိုးရများသည် လုံခြုံရေးအတွက် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူသားချင်း စာနာမှု အထောက်အပံ့များ၊ သဘာဝဘေး ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒ နှိမ်နင်းရေးတို့အတွက် ၎င်းတို့ ကတိကဝတ်များကို ထပ်လောင်း အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
ဒါကာမြို့၊ ဂျဟန်ဂျာနာဂါ တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးပါမောက္ခ ရှာဟက် အီနမ်ခမ်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားရာတွင် “အခု အစည်းအဝေးက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေး၊ ပထဝီဝင်အရ မဟာဗျူဟာမြောက် ဆက်ဆံရေး၊ ရိုဟင်ဂျာ အကျပ်အတည်း အခြေအနေအပြင် တရုတ်အပါအဝင် တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး၊ လုံခြုံရေး မိတ်ဖက်ဆက်နွှယ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ပေါ်ထွက်လာတာကို အာရုံစိုက်တဲ့ သဘော သိသာ ထင်ရှားစေပါတယ်” ဟု သုံးသပ်ခဲ့သည်။
ယင်း အစည်းအဝေးသည် ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်(သို့မဟုတ်) ၃ နှစ်ခန့်က ကျင်းပခဲ့သည့် ဘက်စုံ ပုံမှန် အစည်းအဝေးတခု အဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။ သို့သော် ယခုအစိုးရက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင် ပြန်လည် အာဏာရလာချိန် အမေရိကန်-တရုတ် ကုန်သွယ်ရေးစစ်နှင့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှု တိုးပွားလာခြင်းအပေါ် ယိုးမယ်ဖွဲ့ ပြောဆိုနေခြင်း၌ ယင်းကဲ့သို့ ထပ်လောင်း အတည်ပြုခြင်းက ပို၍ သိသာ ထင်ရှားစေကြောင်း ၎င်းက သုံးသပ်သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာစီနာသည် လာမည့်ဇူလိုင်လ ပထမပတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားရာ အခြားရေးရာများ အနက် ပိုကျယ်ပြန့်သော မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးနှင့် ရိုဟင်ဂျာ အရေးကိစ္စတို့ကို ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဒါကာမြို့ရှိ ဝန်ကြီးချုပ်၏ နိုင်ငံခြားရေးရုံးက သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် “မြန်မာအနေဖြင့် အကျပ်အတည်း၏ ဇစ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရိုဟင်ဂျာများ ၎င်းတို့ ဆန္ဒအလျောက် ဘေးကင်း သိက္ခာရှိစွာ စဉ်ဆက်မပြတ် နေရပ်ပြန်ရေး ဖန်တီးပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအပေါ် ဖိအားပေးရန် လိုအပ်ချက်များကို နှစ်ဘက် အစိုးရတို့က အလေးပေး ဆွေးနွေးခဲ့သည်” ဟု ရေးသားထားသည်။
“ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွင် ယာယီခိုလှုံနေသော အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းခံရသူ ရိုဟင်ဂျာများအတွက် နောက်ထပ် အကူအညီရရေး နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း ပါဝင်လာရန် အမေရိကန်က ကတိပြုခဲ့သည်” ဟု ၎င်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖတ်ရှုရသည်။
ဒုက္ခသည်များနှင့် လက်ခံထားသည့် အသိုင်းအဝိုင်းကို ဆက်ကူညီရေး၊ အကျပ်အတည်း ဖြေရှင်းရန် မြန်မာအပေါ် ထိရောက်စွာ ဖိအားပေးရေးတို့ အတွက် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အတူ နီးကပ်စွာ ဆက်လက် လက်တွဲသွားကြရန် နှစ်ဘက် အစိုးရများက သဘောတူညီခဲ့သည်။
ယခုလက်ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ကော့ဘဇားတွင် ခိုလှုံနေသည့် ဒုက္ခသည် ၁ သန်းကျော် နေရပ်ပြန်ရေး မြန်မာက ဆန္ဒမရှိကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာစီနာက ပြောခဲ့ပြီးနောက် ၁ ရက်အကြာတွင် ယင်း အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသ လွတ်လပ်မှု၊ ပွင့်လင်းမှု၊ အကျုံးဝင်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးတို့အတွက် အမြင်ချင်း ဖလှယ်၍ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရချင်း ဆက်လက် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်သွားကြရန် သဘောတူခဲ့ ကြကြောင်း ပူးတွဲ ကြေညာချက်က ဆိုသည်။
သို့ရာတွင် နှစ်နိုင်ငံအကြား စစ်ရေး သတင်းအချက်အလက် စိစစ်မျှဝေရာတွင် လုံခြုံရေး ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို အမေရိကန်က တောင်းဆိုခဲ့သည်။
လူအခွင့်အရေးနှင့် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေးအတွက် နှစ်ဆတိုး အားထုတ်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို အမေရိကန်က အားပေးခဲ့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ ဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံရေး အက်ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်တို့အပေါ် စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မိကြောင်း အမေရိကန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့သည် လုံခြုံရေးနှင့် စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ကိုင်သွားရန်နှင့် အင်ဒို-ပစိဖိတ် ဒေသ တည်ငြိမ်သာယာ ဝပြောရေး အထောက်အကူ ပြုရန် နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူအချင်းချင်း ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရေးအတွက် သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်း ပူးတွဲ ကြေညာချက်တွင် အဆုံးသတ် ထားသည်။
(ဒါကာမြို့ရှိ ဧရာဝတီ သတင်းထောက် Muktadir Rashid ၏ US-Bangla Dialogue Reemphasizes Voluntary, Sustainable Rohingya Repatriation ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
Topics: ဒုက္ခသည်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, အမေရိကန်